Na-ebugharị Mediterenian n'oge COVID-19 ụzọ Switzerland
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Na-ebugharị Mediterenian n'oge COVID-19 ụzọ Switzerland
Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Akwụkwọ akụkọ Italy • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Kedu ihe dị njọ nke ihe ize ndụ ọ bụ ịkwọ ụgbọ mmiri n'oge Coronavirus? MSC Cruise line chọrọ ịmata ma kwupụta na ụlọ ọrụ laghachiri na azụmahịa. Na Sọnde ndị njem ụgbọ mmiri MSC na-enyocha ọnọdụ okpomọkụ ha ka ha nwee ike ịba na ihe a na-akwụ ụgwọ dị ka ụgbọ mmiri mbụ Mediterenian na-esochi ọgbụgba ọrịa Italy. Ndị ọrụ ahụ nọrọ oge iche tupu ha amalite njem ahụ.
Grandiosa, ọkọlọtọ MSC wepụrụ ka mmadụ gaa njem njem nrọ na Naples, Palermo, Sicily na Valletta, Malta.
MSC Cruises, nke toro site na 800% kemgbe 2004, buuru 2.4 nde ndị ọbịa na 2018 wee kọọ nsonaazụ ego siri ike na ntụgharị nke Billion 2.7 ijeri - rue mgbe Coronavirus kụrụ.
Dị ka MSC webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ bụ ụgbọ mmiri kachasị nke ụwa na onye ndu ahịa ahịa na Europe, South America, na ndịda Africa. Shipsgbọ mmiri anyị na-ebugharị kwa afọ na Caribbean na Mediterranean, na usoro nhazi oge anyị gụnyere Northern Europe, South America, South Africa, China, na Dubai, Abu Dhabi na Qatar.
MSC Cruises bụ ụlọ ọrụ Europe nke Switzerland nwere mgbọrọgwụ miri emi na-arụ ọrụ na Mediterranean Ndị ọrụ 30,000 ụwa nile na ire ụgbọ mmiri ezumike na 69 mba gburugburu ụwa.
MSC, a emeela usoro, maka ndị ọrụ yana ndị njem, akụkụ nke usoro ogbugba ndu na nchekwa ọhụụ. MSC Grandiosa, nke e mere baptizim n'afọ gara aga, ga-ahapụ ọdụ ụgbọ mmiri dị na mgbago ugwu Italy nke Genoa na mgbede Sọnde maka njem abalị asaa na ọdịda anyanwụ Mediterranean.
Onye ọ bụla na-anwale nke ọma, ma ọ bụ nwee ahụ ọkụ, ma ọ bụ nwee mgbaàmà ndị ọzọ COVID-19 ga-agọnahụ ịbanye, ụlọ ọrụ ahụ kwuru. Ndị ọbịa ga-eyiri ihe mkpuchi ihu na igwe mbuli na mpaghara ndị ọzọ ebe ịkpapụ mmekọrịta mmadụ na-agaghị ekwe omume.
Na mbido ọnwa a, gọọmentị gavetali nyere nkwado maka ụgbọ mmiri ịkwapụ ọzọ n'ọdụ ụgbọ mmiri Italytali. Ma ụgbọ mmiri na-amachi oke ikike 70.
MSC jụrụ ikwu ọtụtụ ndị njem nọ n'ụgbọ mmiri a.
Malta bụ otu n'ime mba anọ dị na Mediterenian nke Italytali chọrọ ugbu a ndị njem ga-abịa nyocha COVID-19. Maka ugbu a, MSC na-egbochi ndị ọbịa ya na ndị bi na mpaghara njem njem visa nke mba 26 nke Europe.
MSC kwuru na a ga-enye onye ọ bụla ọbịa na ndị ọrụ nọ n'ụgbọ mmiri aka nke 'na-eme ka azụmahịa ndị na-enweghị kọntaktị gburugburu ụgbọ mmiri ahụ yana ịnye kọntaktị na ịbịaru nso.'
Shipsgbọ mmiri na azụmahịa ha na-eweta n'ọtụtụ obodo Italiantali n'oge njem ụgbọ mmiri mejupụtara akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke'stali dị mkpa.
#iwu ụzọ ahia